Codsi aad uga fiican kan Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah | Androidsis
Haddii aad raadineyso inaad haysato arjiga asalka ah Netflix lacag la'aanIlaa aad iska diiwaangeliso illaa bisha tijaabada bilaashka ah, iska ilow inaad hesho nooc kasta oo habeyn ah maaddaama taasi aysan jirin ama aysan suurtagal ahayn.
Taabadalkeed, maanta waxaan soo bandhigayaa codsi ah dhadhankeyga shaqsiyeed inuu aad ugafiican yahay Netflix, iyo tan ka sii muhiimsan, codsi loogu talagalay daawado filimada iyo taxanaha qulqulka ama xitaa si toos ah u soo dejiso oo dhammaantood waa lacag la'aan.
1 OctoStream beddelka Netflix ee bilaashka ah ee ay tahay inaadan seegin
2 Beddelka ugu fiican ee Netflix ama bilaash ah
2.3 XIDHIIDHKA (Android)
2.13 MiTele (Codsi iyo shabakad)
2.14 AtresPlayer (Android iyo Webka)
2.15 DC Caalamka
3 Appflix, oo ah bedel kale oo Netflix ah oo si fiican u shaqeeyay
OctoStream beddelka Netflix ee bilaashka ah ee ay tahay inaadan seegin
In kasta oo dadka badankood leeyihiin akoonno sharci ah oo loogu talagalay adeegyada fiidiyoowga ah sida HBO, Amazon Prime video ama Netflix, way ka badan tahay inta aan u malayno qoysas badan, hadda ma awoodi karaan kharashka intaas dheer in codsiyadaani ay u malaynayaan inaan ugu talo galnay waqtigeenna firaaqada shaqsi iyo qoys.
Taasi waa sababta maanta aan kuugu keenayo qoraal aan kugula talinayo midka maanta ah barnaamijka ugufiican, kan ugufiican ee Netflix lacag la'aan ah Iyo in aanan joojin doonin isku dayga maxaa yeelay waan hubaa inaad jeclaan doontid.
Codsiga su'aasha laga qabo, sidaan horeyba ugu dhawaaqay cinwaanka boostada, cid kale maahan OctoStream, barnaamij leh astaamaha buluugga octopus, oo aniga laftaydu aan u isticmaalayay dhib la'aan ugu yaraan hal sano ama wax la mid ah.
Codsiga waa isbedelka macquulka ah ee codsiyada kale ee horeyba u joojiyay shaqeynta waqti dheer ka hor, sida Appflix, MegaDeDe, MasDeDe ama PlusDeDe. Codsi leh koox Telegram oo taageera koox iyo kanaal, kaas oo APK-yada laga dhigo mid casriyeysan waxaadna kala soo bixi kartaa midka ku habboon baahiyahaaga gaarka ah ee bilaashka ah.
Linkigan waxaad ka heli kartaa kanaalka Octostream ee Telegram
Linkigan waxaad ka mid noqon kartaa kooxda wada sheekaysiga Octostream.
Mid ka mid ah labada bog, adoo galaya kooxda ama faylalka kanaalka, adigoo gujinaya magaca kooxda ama farriinta ku dheggan hoosta, waxaad ka heli doontaa dhammaan apk-yada la soo galiyay oo, dabcan, iyaga ka mid ah adigu waa inuu doortaa nooca ugu dambeeya ee arjiga, nooca maanta marka la eego Android TV u dhigmi doono nooca OctostreamTV_1.5.8.apk halka nooca caadiga ah, midka aad ku rakibayso Smartphone-kaaga ama Tablet-kaaga uu noqonayo nooca Octostream 1.6.10.apk.
Labada noocba waxaa lagu rakibi karaa Smartphone-ka Android-ka ama Tablet-ka iyo sidoo kale sanduuqa TV-ga ee nidaamka hawlgalka Android, farqiga u dhexeeya labada apk ee xagjirka ah ee ah in barnaamijka loo yaqaan 'Android TV' uu yahay mid si gaar ah loogu talagalay in loogu isticmaalo shaashadaha waaweyn, shaashadaha aan taabashada ahayn ee ay tahay in lagu isticmaalo kontoroolka fog, waana sababtaas barnaamijka TV-ga ee loo yaqaan 'Android TV' waxaa loogu talagalay ujeeddo isku mid ah oo loogu adeegsado kontoroolka fog oo gaar ah.
Iyo in yar oo dheeri ah oo laga sheegayo Octostream, oo ah dareen Netflix xor ah oo dareen leh taas wuxuu la shaqeeyaa habka isu keenaya dhammaan server-yada martigeliya filimada iyo silsiladaha laga sii daayo adeegyada ugu badan ee mushaaraadka maanta la bixiyo. App si fiican u shaqeynaya oo aan ka heli karno waxyaabaha ugu fiican ee laga sii daayo Netflix ama adeegyada kale ee socodka sida HBO, Disney Plus iyo xitaa waxyaabaha laga helo Movistar.
Si aad u dhamayso u sheeg taas Codsiga Android wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa Chromecast si uu ugu diro waxyaabaha ku jira shaashadda telefishankayaga Smart TV ama Chromecast, iyo sidoo kale inay leedahay adeeg galitaan ee arjiga, soo galida oo lagu sameeyo track.TV, soo galitaan noo ogolaanaya inaan heysano dhamaan taxanaheena iyo filimada aan kawada shaqeyneyno dhamaan terminaalkeena aan ku rakibnay Octostream.
Waxa kaliya ee lagu soo daray arjiga ayaa ah xayeysiis shaashad buuxda ah oo soconaya illaa 20 ilbiriqsi oo adiga kugu soo boodaya, sida caadiga ah marka aad xulaneyso serverka aad rabto inaad ka daawato filimka ama taxanaha, qaar Xayeysiisyo xaddidan oo xaddidan laakiin taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka saarto nooc xubinnimada hal mar ah oo ah 2.99 Euros.
Xubin ahaanta ka saareysa xayeysiinta waligeed iyo sidoo kale inaan kuu ogolaano inaad si toos ah ugu soo saarto waxyaabaha ku jira thumbnail laftiisa oo lagu muujiyay natiijooyinka raadinta ee barnaamijka Android. Xaaladda android TV, waxay kaliya ka takhalusi doontaa xayeysiinta nolosha ka dambeysa isla bixintaas aan kor ku soo sheegay.
Beddelka ugu fiican ee Netflix ama bilaash ah
Waa tartanka ugu weyn ee adeegyada qulqulka ugu weyn maxaa yeelay waxay ku timid tumasho. Xaqiiqdii waa kan ugu raqiisan, sidaa darteed waxay noqon kartaa ikhtiyaar weyn haddii aad rabto inaad daawato filimada, taxanaha iyo waxyaabaha kale ee ku wajahan carruurta. Amazon waxay soo gashay ciyaar iyadoo og iyadoo laga yaabo inay # 1 ku jirto adeegga dalabka adduunka oo dhan.
Amazon Prime Video wuxuu leeyahay taxane guryo ah, waa kiiska taxanaha ah sida Wiilasha, The Omens The Good, Gods American iyo aruurinta weyn ee bogga gadaashiisa. Tan waxaa lagu daray liistooyin badan oo filim ah oo heer fiican ah oo leh waxyaabo badan oo carruurta ah oo ay ku madadaalin karaan saacado badan.
Prime Video wuxuu leeyahay qiimo sanadle ah 36 euro, oo u dhiganta qiyaastii 3 euro bishii bishii 12-kaas bilood.
Waxay bixisaa 1 bil bilaash ah si loo tijaabiyo ka hor inta aan la shaqaaleysiinin, iyada oo siineysa marin dhammaan waxyaabaha ku filan markii aad gasho bogga. Waxaad isku mar geli kartaa ilaa 3 aalad. Waxaad heli kartaa bishaada bilaashka ah ee Prime Video link this
Barxadda qulqulka ayaa u timid inay bixiso waxa ugu tayada sarreeya uguna tayada wanaagsan iyo liistada ballaaran. Waxaan marin u heli doonnaa dhammaan filimada Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic iyo wax walba oo la xiriira adduunka Disney. Mid ka mid ah waxyaabaha ka reeban waa taxanaha Mandalorian, oo ka baxsan bilowga Disney +, marka lagu daro tan waxaa ku jiri doona waxyaabo u gaar ah macaamiisha.
Gudaha Isbaanishka waxaa laga sii daayay bishii Maarso iyada oo qiimo aad u soo jiidasho leh tan iyo markii la sii daayay, waxaan iska qori karnaa 6,99 yuuro bishii ama isdiiwaan gelin kartaa sanadkii 69,99 euro. Waxay leedahay muddo tijaabo ah oo ah 7 maalmood in la ogaado iyo haddii aad jeceshahay inaad ugu raaxaysato bixinta dhibcaha kala duwan ee ay bixiso.
Disney + ayaa u oggolaan doonta isticmaaleyaasha ugu badnaan 4 ciyaarood isku mar. Diiwaangelintu markii hore waxay ku bilaabatay qiimo jaban, maadaama ay siisay ikhtiyaar ah in la isdiiwaangaliyo muddo 10 euro ka yar, oo u dhiganta 59,99 euro. Sidoo kale bishii Febraayo waxaa jiray ikhtiyaar ah in lagu shaqaaleysiiyo adeegga 5 euro ka yar.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee loo heli karo aaladaha Android ee lagu daawan karo taxanaha iyo filimada, taxanaha waxaa ka mid ah The White Princess iyo Capture, oo labaduba ah guul weyn tan iyo markii ay baxeen, sidoo kale kuwa kale sida The Act, Power iyo Pennyworth iyo liis dheer ayaa la heli karaa.
Filimaan cusub iyo taxane gaar ah ayaa lagu daraa bil kasta, waxay ku jiraan tayo tayo sare leh waxayna soo bandhigaan soo dejisan si ay u awoodaan inay ku arkaan iyaga oo aan lahayn meelkasta oo internetka ah, wax muhiim ah hadaan safrayno ama tagno meelo aan caymis lahayn. Waxay leedahay mashiin raadin wanaagsan oo lagu helo taxane iyo filimaan.
Waxay leedahay mudo tijaabo ah 7 maalmood, waa la joojin karaa wakhti kasta haddii la doono. Qiimaha rukunka bil kasta waa 4,99 euro bishii.
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu yar ee la ogyahay, in kasta oo ay tani tahay adeegga qulqulka ka socda Mareykanka oo haddii aan rabno inaan kireysano waa inaan isticmaalnaa VPN si aan ugu raaxeysanno kumbuyuutarkayaga ama taleefanka gacanta. Waxaad ubaahantahay inaad uga boodo wadamada kale hadaad rabto inaad la tartanto Amazon, Disney + ama Netflix lafteeda.
Hulu waxay fursad u siineysaa ilaa 200 kanaal telefishin iyo istuudiyayaal, buugga wuxuu sidoo kale noo oggolaanayaa inaan daawanno filimada, silsiladaha, bandhigyada dhabta ah iyo tartamada markii aan ku galno cinwaanka isticmaalaha iyo lambarka sirta ah. Waxaa sidoo kale jira xirmooyin dhowr ah oo ka mid ah kanaallada lacagta xad dhaafka ah iyo telefishanka tooska ah ee Mareykanka.
Xirmooyinka aasaasiga ah waxay ku kacayaan $ 5,99 (5,44 euro si loo beddelo) xirmada aasaasiga ah, waxayna kuxirantahay haddii aad rabto xirmo caymis waxay ku kacaysaa lacag dhan $ 30-40 dheeraad ah. Taranka isla mar ahaantaa waa ugu badnaan laba ugu badnaan.
Waa mid ka mid ah bogagga yar ee bixiya tayada qulqulka tayada leh ee bilaashka ah, adeegna siiya sannado badan. Waa beddel sharci ah, xaaladdan waxaan u baahan doonnaa VPN si aan u aragno wax kasta oo lagu bixiyo webka markaan soo galno. Waxay diiradda saaraysaa filimada iyo taxanaha.
Waxaa jira filimaan iyo silsilado badan oo sanado badan laga soo gudbay, oo muujinaya filim guul ka gaadhay Spain sida Yaxaas Dundee (1983), laakiin ma aha kan kaliya, waxaan sidoo kale arki karnaa kuwa kale sida Rasaasta Fidsan ama Waqtiga ugu weyn bogga.
Looma baahna rukun, marinku waa bilaash VPN.
Sharadka cusub ee Movistar waa inuu bilaabo Movistar + Lite, oo ah adeeg aan kireysan karno adigoon haysan adeeg hore si aan ugu raaxeysto waxyaabo badan oo gaar ah oo ka socda tan iyo barnaamijyada kale. Tan waxay rabtaa inay la mid noqoto HBO, Netflix iyo Disney + aan kor ku soo sheegnay ee Spain iyo dhulal kale oo ay ka hawlgasho.
Waxyaabaha waa weyn ee ay siin doonto marka aan helno waa taxane sida "Game of Thrones", Mad Men, Orange waa Madoow Cusub, Guryaha Kaararka iyo kuwa kale oo badan, waxaa sidoo kale jira barnaamijyo sida La Resistencia oo uu qoray David Broncano iyo isboorti dhacdooyinka, iyo waxyaabo kale oo badan.
Adeegga Movistar + Lite wuxuu ku kacayaa 8 yuuro bishii wuxuuna u oggolaanayaa isla mar uun in lagu ciyaaro ugu badnaan laba qalab isla waqti isku mid ah. Waxay leedahay dalab ay ku isticmaali karto Movistar + Lite muddo bil ah qiimo eber ah, wax aadan ka maarmi karin haddii aad rabto inaad tijaabiso ka dibna ku sii sugnaato bartaas.
Waa adeeg qulquli ah oo aan ka maqnaan karin liiskan, maaddaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn dhammaan waxyaabaha ay soo bandhigto barxadda marka aan helno marinka ugu horreeya ee diiwaangelinta. Tayada ayaa ka sarraysa tirada ku jirta barxaddan, in kasta oo ay taasi jirto, inyar oo kayarna waxay leedahay heer sare oo taxane ah, filimo iyo dokumentiyo.
Waxaa jira filimo fara badan oo superhero ah, taxane ah sida Silicon Valley, The Sopranos, Veep, Chernobyl ama "Game of Thrones" oo caan ah, tan dambe ayaa ah mid ka mid ah taxanaha loogu booqashada badan yahay ee adeegyadan bilahaan tan iyo markii COVID uu faafay - 19.
HBO gudaha Isbaanishka waxay bixisaa mudo tijaabo ah oo ah 2 todobaad kahor intaadan shaqaalayn, inkasta oo aad dooran karto inaad si toos ah u kireysato haddii aad rabto inaad aragto bil ka bil. Kuu ogolaanayaa loo maqli karo 2 aaladood isla waqti isku mid ah.
Sky horeyba waxay uga shaqeysaa Isbaanish iyada oo adeegsaneysa adeeg tayo sare leh. Sida adeegyada kale, waxay na siineysaa marin taxane ah, barnaamijyo, filimaan iyo kanaallo TV oo heer sare ah, buugyaraha aad buu u ballaadhan yahay xitaa waxaan arki karnaa filimka meel kasta oo aan uga tagno, iyo fursado kale oo badan oo ay ugu mahadcelinayaan macaamiisheeda loo maqli karo.
Mar alla markii adeegga qandaraas la siiyo bishiiba, waxay kuu oggolaaneysaa inaad daawato kanaallada sida MTV, Canal Historia, Fox, SyFy ama Nickelodeon, marka lagu daro 12 kanaal oo kale oo ka mid ah 16-ka uu adeegani leeyahay. Waxay sidoo kale noo oggolaan doontaa inaan aragno barnaamijyo iyo taxane ay sii deynayaan kanaallo kale oo caan ka ah Spain ama dibedda.
Sky Spain, sida tartanka oo kale, waxay fursad u siineysaa bil bilaash ah diiwaangelinta kadib, markii ay haysato waxay ku kacaysaa qiyaastii 6,99 euro bishii. Waxay u oggolaan doontaa dib u ciyaarista seddex qalab isla waqti isku mid ah, mid ka badan inta kale ee adeegyada.
Rakuten wuxuu go'aansaday inuu iibsado Wuaki.tv, oo ah barxad Isbaanish ah oo lahayd macaamiil badan tan iyo markii adeegga dalbashada laga bilaabay internetka. Hada magaca Rakuten TV waa mid ka mid ah hormuudka daahfurka sanado badan ka hor wuxuuna sii wadaa inuu ku shaqeeyo mahadsanidiisa Jabaan.
Waxay leedahay liis-gareyn ballaaran oo taxane ah iyo filimno loogu talagalay dhagaystayaasha dhallinta yar, in kasta oo ay run tahay inay si fiican ula jaanqaadaan dadweynaha guud haddii aad rabto inaad filim aragto wakhti kasta adoo isku xiraya. Rakuten TV wuxuu leeyahay qeyb loo yaqaan 'Videoclub' oo aad lacag ku bixin karto si aad u daawato waxyaabaha gaarka ah, oo ay ku jiraan filimo badan oo shineemo ka soo baxa oo laga heli karo xafiiska sanduuqa.
Qiimaha rukunka waa 7,99 euro bishii, inkasta oo bogga ay ku bixiyaan bil bilaash ah oo tijaabo ah si loo tijaabiyo adeegga sida adeegyada kale ee qulqulka u sameynayaan, in kasta oo ay kaaga baahan doonto inaad gasho xogtaada shakhsi ahaaneed. Waxay bixisaa loo maqli karo isku mar on 2 qalabka.
Barmaamijka fiidiyowga ee hogaaminaya ayaa in muddo ah bixinayay ikhtiyaarka ah inuu awoodo inuu kiraysto ama iibsado filimada shaleemooyinka aad u kala duwan, hoos u dhaca ma awoodo inuu ku kala saaro qaab xarfaha ama ku raadinta noocyo, wax ay tahay inay hagaajiyaan haddii ay doonaya inay helaan dadweynaha guud.
Markaad gasho YouTube.com waa inaad gelisaa mashiinka wax raadinta «Filimada» waxayna bilaabi doontaa inay ku siiso xulashooyin badan oo iyaga ka mid ah, kiiskan kuwa ka sarreeya waa waxyaabaha uu inta badan dalbado macmiilku, kiiskan mid ka mid ah «Wiilasha Xun ee Nolosha», 1917, Biyaha hoostooda ama DoLittle, iyo dhowr kale.
Qiimaha kirada ama iibsiga ee filimku wuxuu ku xirnaan doonaa midka aad dooratay, tusaale ahaan Bad Wiilasha Nolosha waxay leeyihiin qiimo kiro ah 3,99 euro iyo qiimo iibsi ah 9,99 euro, iyadoo la siinayo ikhtiyaarka ah in lagu arko qaraarro kala duwan, oo ay ku jiraan 4K.
Web: Filimada Youtube
Waxay leedahay liistada ugu weyn ee isboortiga, iyadoo heshay xuquuqda MotoGP gebi ahaanba, marka lagu daro dhacdooyin badan oo isboorti oo toos ah, oo ay ku jiraan qeyb weyn oo ka mid ah kubada cagta caalamiga ah iyadoo lagu darayo Premier League dabka. Koobka Koofurta Ameerika, J-League, MLS iyo kubado badan oo dibedda ah. Waxay kaloo leedahay Euroleague iyo ciyaaro kale oo badan sida Tennis, Baaskiil, iwm.
Isboortigaan oo dhan marka laga reebo, waxaa ku jira kanaalada Eurosport 1 iyo Eurosport 2 ee HD, laba kanaal oo si toos ah u tabinaya isla markaana xitaa aan awoodi doonno inaan aragno dhacdooyin kale oo dib u dhacay, iyo fursado kale.
DAZN waxay siisaa 1 bil bilaash ah xilligan, markaa qiimaha waa 9,99 bishii ama 99,99 euro ee rukunka sanadlaha ah. Ma laha waaritaan, macmiilku wuu joojin karaa qandaraaska waqti kasta.
DAZN: Ciyaaraha Tooska ah
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu dhammaystiran ee Android wax kasta oo ay bixiso marka barnaamijka la isticmaalo. FuboTV waa adeeg fidin ah oo loo adeegsan karo kombiyuutarka, taleefanka gacanta, kaniiniga ama qalab kale oo la jaan qaada. Xaqiiqdii waa beddel weyn oo loo maro Netflix oo ay ku jiraan kanaalada DTT.
FuboTV wuxuu soo bandhigayaa taxanaha caalamiga ah ee ugufiican, oo ay kujiraan Game of Thrones, Outlander, Xishood la'aan, Jane the Virgin, Balaayiin iyo kuwa kaloo badan. Waxaa ku jira kanaalka Movistar Series oo leh waxyaabaha ugu fiican ee mala'awaalka ah, kanaallo bilaash ah sida Antena 3, TVE-, Neox, Nova, Teledeporte, La Sexta iyo kuwa kale oo badan oo la heli karo. Waxaas oo dhan waxaa lagu darayaa bixinta dhacdooyinka isboortiga haddii ay dhacdo in kor lagu soo sheegay ay kuugu muuqanayso wax yar oo adiga kuu oggolaanaya duubista 30 saacadood oo bilaash ah si loogu duubo barnaamijka aad rabto.
Waxay ku siinaysaa suurtagalnimada in la tijaabiyo adeegga bilaash ah 7 maalmood, markaa khidmadda bil kasta waa 2,99 euro.
fuboTV: Taxanaha iyo TV-ga tooska ah
MiTele (Codsi iyo shabakad)
Waa barxadda dhijitaalka ah ee 'Mediaset Spain', waxay ku siisaa waxyaabaha ku saabsan baahida iyo noolasha. Kanaallada la heli karo waxaa ka mid ah Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Divinity iyo Be Mad, dhammaantood waa la heli karaa markii aad dalabka dirtid.
Waxqabadkeeda waxaa ka mid ah inaad ku darto waxyaabaha ku jira liiskaaga, ku dar waxyaabaha ugu cadcad, ku xadididda daalacashada carruurta yar yar mahadnaqa awoodeeda waalidnimo, fiiri waxyaabaha aad ka tagtay, tayada HD ee fiidiyowyada oo aad la falgeli karto badhanka ON. Thanks to kanaaladaas waxaad awoodi doontaa inaad aragto taxane sida La que se Avecina, Castle, Waan ogahay cidda aad tahay, Castle, Grey's Anatomy, Cobra Alert iyo liis wanaagsan oo xilliyadeeda oo dhan ah.
MiTele waa codsi bilaash ah, in kasta oo ay jirto ikhtiyaari ah in lagu qandaraas karo MiTele Plus 3 euro bishii ama 30 euro sanadka oo dhan si looga takhaluso xayeysiinta iyo marin u helka waxyaabaha gaarka ah, fursadaha waxaa ka mid ah in la awoodo qandaraas LaLiga, Horyaallada iyo dhacdooyinka kale ee isboorti ee qiimahoodu way kala duwanaan doonaan waxayna kuxirantahay haddii aad doorato hal baako ama kan kale.
AtresPlayer (Android iyo Webka)
Ku dar dhammaan kanaallada telefishanka DTT, oo ay ka mid yihiin tan ugu weyn waa Antena 3, waxa kale oo ku jira Mega, Neox, Nova, LaSexta iyo Atreseries, dhammaan wadiiqooyinka tooska ah waadna heli kartaa waxyaabaha ku jira xilligan aad ka tagtay, marka lagu daro liiska in loo arko siday u kala horeeyaan.
Thanks to kanaaladaas waxaad awoodi doontaa inaad daawan karto wararka, riwaayadaha, barnaamijyada, filimada, taxanaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah. Sidoo kale dhacdooyinka isboorti ma maqnaan doonaan ilaa iyo inta ay ka baahiyaan mid ka mid ah kanaalkiisa xorta ah.
Xadgudbeyaashu waa codsi bilaash ah, waxaad sidoo kale daawan kartaa waxyaabaha ku jira kiniinkaaga, kombiyuutarkaaga iyo qalab kale. Atresplayer wuxuu siinayay Flooxer in mudo ah, taas oo ah koonto caymis ah si loo daawado waxyaabaha gaarka ah, saabuunta opera, dokumentariyada, taxanaha iyo waliba filimada HD ama 4K. Qiimaha Flooxer waa 2,99 euro bishii iyo 29,99 euro sanadkii, in kasta oo ay waliba kuu ogolaaneyso inaad si bilaash ah isugu daydo muddo gaaban - oo aan la cayimin -.
Barmaamijka qulqulka adduunka ee DC Entertainment iyo Warner Bros ayaa soo jiray muddo dheer. Waxay ku siin doontaa xulashada awood u lahaanshaha taxanaha, filimada iyo xitaa majaajillo kombuyuutar leh tayo aad u wanaagsan. Haddii aad taageere weyn u tahay Filimada Cadaaladda, Superman ama Batman, tani shaki la’aan waa doorashada ugu fiican.
Diirada kama saareyso kaliya taxanaheeda ama filimadeeda, waxay sidoo kale hordhac u yihiin taxane sida Doom Patrol, The Swamp Thing ama Titans, oo dhammaantood ku guuleystey inay soo jiitaan dadweynaha guud ee Mareykanka Si ay ugu awoodaan inay ku adeegsadaan Spain waxaad u baahan doontaa VPN, maadaama uusan ka shaqeyneyn Spain xilligan.
Qiimaheeda billaha ah waa $ 7,99 (7,27 euro isbedelka). Waxaa loo isticmaali karaa ugu badnaan 2 aalado isku mar.
Web: DC Caalamka
Appflix, oo ah bedel kale oo Netflix ah oo si fiican u shaqeeyay
Far waa codsiyo sida Taxanaha 'Droid' iyo PelisDroid, taasi aniga ahaan haa Weli waa mid ka mid ah codsiyada ugufiican ee lagu daawado filimada iyo taxanaha bilaashka ah, Kuwani waxay ka tagayaan waxyaabo badan oo la doonayo marka loo eego naqshadeynta kuhadalka maaddaama ay ku hareen is-dhexgalyo duugoobay oo ka fog barnaamijyada sida Xikmado APK o Dheeraad ah ama codsigan aan maanta doonayo inaan soo bandhigo oo aan si gaar ah ugula taliyo.
Codsiga aan rabo inaan maanta kuu soo bandhigo, codsi ka jawaabaya magaca AppflixSi aan caadi aheyn oo ugu yaraan xilligan, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si toos ah uga soo degsanno Google Play Store adoo adeegsanaya xiriirka tooska ah ee aan uga tagayo wax ka hooseeya xariiqyadan:
Haddii waqtiga aad aqrinaysid qoraalkan, aad ogaatay in arjiga Appflix uusan ku sii jirin Google Play Store maxaa yeelay waa laga saaray, ha ka welwelin maxaa yeelay Laga soo bilaabo bulshada 'Androidsis' ee ku jirta Telegram waxaan u samaynaynaa APK oo aad ku dejiso leh oo keliya dhagsii isla xiriiriyahan ama waydii qofkii dhexdhexaadiye ka ah kooxda ugu fiican Android Telegram. Waxaan idin xasuusinayaa in kuwa dhexdhexaadiyeyaasha ahi maanta yihiin @jorgealejo, @Dezfachate, @AdemirFree, @Nacaybtire iyo naftayda @abdisalam.
Appflix wuxuu adeegsadaa isla nidaamka sida barnaamijyada sida SeriesDroid S2 iyo PelisDroid S2 in kasta oo la adeegsado qaab adeegsade adeegsade in runta ay aad uga macaan tahay kana waxtar badan tahay labadan codsi ee aan kugula taliyay aad iyo aad. Marka, kaliya adoo ordaya arjiga waan heli doonnaa, iyada oo aan loo baahnayn wax diiwaangelin ah ama nooc kasta oo galitaan ah, filimo badan oo bilaash ah iyo taxane si aad u daawato sida qulqulka ama si toos ah ugu soo dejiso waxyaabaha ku jira bartayada Android.
Interface A aad u fiican sida kaararka muuqaal sare kaas oo aan ka awoodi doonno inaan dhex marno dhammaan waxyaabaha ku jira martigelinta barnaamijyada dibedda.
In Appflix waxaan ka helnaa dhammaan waxyaabaha ku jira martigelinta server-yada kala duwan oo si habboon loogu qoondeeyey si loo helo loona abaabulo waxa aan dooneyno inaan ku aragno qaab aad u fudud oo nidaamsan. J) Haa waxaan haynaa laba qaybood oo waawayn sida Filimaan iyo Taxaneyaal, halka dhexdooda aan ka heli doonno waxyaabaha loo qoondeeyey noocyo, kuwa ugu cadcad iyo ikhtiyaar la yiraahdo Discover halkaasoo lagugula talin doono nuxur ay u kala saareen caan, Billboard iyo Best Rated marka laga hadlayo qaybta Filimada, iyo kuwa caanka ah, ee la soo saaray maanta ama soo saarista kiiska taxanaha ah.
Kaadhadh kasta oo na tusay labadeenuba qaybta filimada iyo silsiladaha, qaybta midig ee sare wadnaha ayaa ka muuqda kaas oo adigoo gujinaya uun midabkiisu casaan yahay, sidaasna uga tagaya filimka ama silsiladda lagu marti galiyay qaybta filimada aan jecel nahay ama taxanaha oo markaa aan awood u yeelan karno inaan ku helno waxyaabaha calaamadeysan qaab aad u dhakhso badan.
Adoo gujinaya kaararka filim kasta ama taxane ah, marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad aragto dhammaan server-yada filimka ama silsiladda lagu martigelinayo, iyo sidoo kale tayada ama luqadda, Macluumaadka la xiriira filimka ama taxanaha la sheegayo ayaa sidoo kale la muujiyey, suurtagalnimada in la arko trailer ama jaangooyooyinka la heli karo si loo arko haddii ay tahay doorbidkeenna ka hor inta aan la arkin, ama ikhtiyaar aad u xiiso badan oo ku talinaysa waxyaabo la mid ah midka la soo xulay.
Wixii intaas oo dhan ah iyo inbadan, aniga maanta aniga oo barbardhigaya Appflix iyo codsiyada kale si aan u daawado filimada iyo silsiladaha oo bilaash ah, waxaan qabaa inaan shaki ku jirin kahor codsiga ugufiican ee daawashada filimada iyo taxanaha oo bilaash ah. Waxa kale oo jira xalal badan oo aad ka arki karto tan Liistada bogag lamid ah Plusdede.
Madaxa cinwaanka waxaan kaaga tagay fiidiyoow aan si faahfaahsan kuugu tusayo dhammaan dhinacyada ugu xiisaha badan ee arjiga iyo wixii ka sarreeya, waxaan ku tusayaa sida saxda ah ee loogu isticmaalo daawan filimaan bilaash ah iyo taxane bilaash ah oo toos ah iyo si aad u soo dejiso si aad u daawato iyaga oo aan u baahnayn xiriir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » App aad ugafiican Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah
Waan soo dejin lahaa laakiin waxaad iga mamnuuceysaa kanaalkaaga telegram inaad si cad wax u sheegto iyo sida maamulkaagu u dhaqmo
Maamulayaasha Androidsis ama dhexdhexaadiyayaashu waa kuwo aan caadi aheyn waana ku mahadsan yihiin iyaga inay suurtagal tahay in lagu shaqeeyo beel ka badan 8300 xubnood.
Haddii lagaa mamnuuco kooxda, waxay u badan tahay inaad jabisay sharciyada wada noolaanshaha in ka badan hal jeer.
Waa caadi in ay "ka fiican tahay Netflix" oo bilaash ah. Sideed u maareyneysaa bixinta xuquuqda lahaanshaha ee milkiilayaashooda sida Netflix u sameyso?
Ku jawaab Walker
Ka bax xadka?
Ma shaki baa
Gali Bulshada Androidsis ee Telegram oo ka soo degso APK halkaas oo aan soo dejinay oo aan falanqeynay.
Uuffff hal dhinac waan ku qanacsanahay waqtiga aan ka helo barnaamijyo cusub oo aan kula taliyo laakiin waxaan dareemayaa xoogaa raaxo la'aan ah inaan arko waxyaabaha sida sharci darada ah ku jira. Waan ogahay inaysan qori igu tilmaameynin inaan isticmaalo laakiin waxaan la joogaa Netflix.
Muxuu yahay dhar baloog ah. Ka tirtirida quudintayda 3… 2… 1
Ku jawaab Gfreiller
Waxaan u arkaa inay gabi ahaanba tahay wax laga xumaado inaad xayeysiiso codsi kuu ogolaanaya inaad soo saari karto waxyaabaha ku jira burcadnimada.
Qoraalkani wuxuu aad ula mid yahay mid kale oo aad qortay Oktoobar 1, 2017 oo cinwaan la mid ah ah: «Ka wanaagsan Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah !! Plusdede ayaa laga heli karaa Google Play Store ».
Waxaan kuu sheegayaa isla wixii aan kuu sheegay markaas:
- Waxay leedahay xayeysiin
- Xidhiidhada qaarkood ma shaqeeyaan
- Ciyaar waxyaabo aan sharci ahayn
- Ma ogin inay wali ku sii jiraan Play Store-ka.
Laakiin hey, waa (wax badan!) Way ka fiican tahay Netflix.
Codsigu wuu xadidan yahay markaad ka soo rakibayso Play Store, laakiin markaad isku daydo inaad ka ciyaarto waxyaabo ka mid ah waxay ku siineysaa xiriiriye si aad mar labaad uga rakibto meel ka baxsan dukaanka ciyaarta halkaasna haddii ay dhameystirto, runta ayaa aad u wanaagsan
Bilaash laakiin xitaa marka la eego fiber optics-ka waan arki karaa dareeraha, ugu yaraan halkan Chile oo leh 8 megabytes ADSL waan arki karaa Netflix bilaa daahitaan iyo tijaabinta codsigan 40 MB ee fiber optics ah, xitaa ma arki karo 2 daqiiqo oo filim ……. .Free !! !!!! hahahaha waa bilaash laakiin way nuugtaa.
Adrián by Rafael Calzada dijo
Ma shaqeyneyso markii filim la dhigayo shaashadda ayey banneynaysaa waxayna ku siinaysaa ikhtiyaarka ah "isku day goor dambe". Waqti lumis?
Jawaab Adrián de Rafael Calzada
Ciyaaraha Rabshadaha 'Legends of Runeterra Hada Waa Laheli Karaa - League of Legends Card Game
Magaca Xiaomi ee 'Mi 10 Edition' cusub ayaa noqon doona Mi 10 Lite Zoom oo caalami ah